Ukulungiswa Kwezimoto Kuzaliswe Njani kwaye Kulungile?
I-Standard Standard Pay Pay Scale kunye nendlela echaphazela ngayo iWallet yakho
Usenokuba ulivile igama elibethelwa malunga - "isantya esinqabileyo." Kodwa isantya esiphezulu sithetha ntoni ngokuthe ngqo? Abaninzi baya kukuxelela ukuba yindlela yokuthengisa izithengi zabo. Aba bantu badla ngokungazi kakuhle. Inkqubo yokulinganisela isantya sokulungiswa kunye nokuhlawula ayikho into ekhohlakeleyo, kodwa iveza iingxaki ezithile ezityekisayo kwivenkile.
Intlawulo Yentlawulo Yesiqhelo Esisiseko
Yiyiphi ixabiso lokuhlawula ixabiso eliphantsi? Kukho imbali emva kokuphuhliswa kwenkqubo yesantya, kodwa * yawn *, akudingeki ukuba singene kuloo nto.
Masithi uthathe imoto yakho okanye iloli kwindawo yokufakelwa kwepompo yamanzi. Umatshini ukhangele ukulungiswa kwincwadi yakhe, kwaye umxelela ukuba ukutshintsha umpompo wamanzi kwisithuthi sakho kuthatha iiyure ezingama-3. Uhlawuliswa umsebenzi weeyure eziyi-3 ukulungiswa - isilinganiselo esicacileyo esisekelwe kwintetho ethi le ncwadi. Kulula ngokwaneleyo, akunjalo?
Ukuzaliswa ngokubhekiselele kwixesha elifanelekileyo lezeMisebenzi
Ngoko yintoni inkulu? Kubonakala kunqunywe kwaye kuyomile. Ukudideka kuza xa umsebenzi usenziwa. Masithi umatshini uyazi oko akwenzayo kwaye uyakwazi ukufaka ipompo yamanzi kwiiyure ezimbini kunye nesiqingatha. Ngaphantsi kwenkqubo yesantya ephantsi, uhlawula iiyure ezingama-3 zabasebenzi. Ouch. Akubonakali kulungile, akunjalo? Ngaphambi kokugqithisa isigwebo, kufuneka uvale amabini omabali ebali.
Ukuba ukhononda kwivenkile malunga nokuhlawula iiyure zomsebenzi ngaphezulu kunokuba zisetyenzisiweyo, uzakufumana impendulo ngokukhawuleza. Ngaphandle kokulindelekileyo "yile ndlela eyenziwe ngayo," kwaye "asiyibeki imigangatho, le ncwadi" uya kufumana impendulo engakumbi.
Iiyure ezihlawulwayo ezibhaliweyo kwinqanaba lexabiso lentlawulo zisekelwe kwithuba eliza kuthatha umatshini oqhelekileyo ukugqiba umsebenzi. Ukuba unomncedisi ophezulu ongentla onamava eminyaka, kuyacaca ukuba uya kukwazi ukwenza umsebenzi ofanayo ngokukhawuleza. Usengumsebenzi weeyure ngeeyure ezingama-3 kuba luqeqesho lwakhe olubanzi kunye namava amenza ukuba enze ngokukhawuleza, uqeqesho kunye namava axabisa imali endleleni.
Ngelishwa, kukho icala elimnyama kwi-rate rate flat, kwaye livela phezulu. Uninzi lwee mechanics luya kuhlawulwa ngokusekelwe kwimizuzu emininzi ehlawulwayo - yintoni incwadi yesantya esithethileyo-iqokelela. Ngaphezulu koku, ulawulo lubeka uxinzelelo oluninzi kwii-technician kwi-bill yezinto ezinokwenzeka ngabantu. Ukuba bawela ngaphantsi kweqela elithile leeyure ngosuku, i-techs ineengxaki. Kwaye akukhathazeki ukuba kutheni usuku luhamba ngokukhawuleza. Kwesobunxele kwindawo apho umntu elungisa ukulungiswa angammisa emva, alahlekelwe yimali, aze afumane abaphathi abaphefumula entanyeni yakhe, ezinye iimishini ziza kukhawuleza zenze umsebenzi kwaye zenze amancinci. Yilapho i-flat rate rate ingaphumeleli.
Umgca wezona zintengiso zokuthengisa zisebenzisa olu hlobo lweshedyuli yokuhlawula ukujonga ukuba kufuneka uhlawule kangakanani ukulungiswa kwemoto. Ngamanye amaxesha kunokubonakala ngathi uhlobo lomdlalo wegobolongo obangela ukuba uhlawule ngaphezu kokuba ufanele umsebenzi, ekuqalekeni, kubonakala ngathi iya kuhlawulwa ngeyure. Kodwa ekugqibeleni, yindlela yodwa isitolo esinokuyenza. Khumbula, unako ukutshintsha ioli yakho okanye ukulungisa i-windshield yakho ekhaya! Ukuhlawula ngokwakho umsebenzi wokulungisa ukhulu. Ukuba uyazikhwaza, ungakhangela kwisibuko uze uzihlawule ngokuphindwe kabini.
Okanye unako ukuhlawulisa elinye ilungu lentsapho ngomsebenzi owenzayo (oku akunconywa njengoko ndifumene ngaphezu kwezinto ezimbalwa ezingcolileyo zikhangeleka kubantu abahlala ekhaya ababulele ngomsebenzi, kodwa kungekhona loo mbulelo.
Izibonakaliso ze-Master Cylinder Ukuhluleka
Indlela yokufumana iSekethi esifutshane
Ulawulo lweMicrosoft Units
Ngaba Kukulungele Ukuziqhenqa okanye Ukufudumala Kwimoto Yami?
Kuthetha ntoni i-OEM?
Ukuchonga isandi sokuHluma kwiInjini yakho
Ukuhlola i-Sartre's Existentialist Izihloko ezikholweni olubi kunye nokuwa
Ukufunda izenzibe zaseItali kunye neziPhulo
Thepha uMdaka oMdaka
Indlela yokusebenzisa iJapan igama elithi Jiyuu
Oko Kufuneka Ukwazi Ngeeveki ze-MBA IiNkqubo
INzululwazi yeMisebenzi yeBhodi
AmaSikh Baby Names Ukuqala kunye noR